Baarlamaanka Puntland oo la horgeeyay Miisaaniyadii ugu badneyd abid | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Baarlamaanka Puntland oo la horgeeyay Miisaaniyadii ugu badneyd abid
Baarlamaanka Puntland oo la horgeeyay Miisaaniyadii ugu badneyd abid
Wasiirka Maaliyadda maamulka Puntland Xassan Shire Cabdi, ayaa maanta mudanayaasha Baarlamanka horgeeyay odoroska Miisaaniyadda dowladda ee sannadka 2020-ka.
Odoroska Miisaaniyadda 2020-ka oo dhan $ 346,416,158.99 malyan oo Dollar, ayaa shalay ka soo gudbay Golaha Wasiirada, kadib markii ay ku ansixiyeen kulan aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen xarunta wasaaradda Maaliyadda ee caasimadda Garoowe.
Wasiirka Xasan Shire, oo xildhibaannada Baarlamanka u akhriyay warbixinta Miisaaniyadda dowladda ee 2020-ka, ayaa sheegay in wasaaraddu ay baahiyaha as’aasiga ah iyo sida ay u kala mudan yihiin, ay ku salaysay odoroska Miisaaaniyadda, iyadoo lagu xisaabtamayo dakhliga lasoo xarayn karo iyo caawimaada la heli karo.
Miisaaniyadan ay soo gudbiso wasaaradda Maaliyadda Puntland, waxaa ku jira lacago loo qoondeeyay hawlaha horumarinta sida dhisamaha Wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo, dayactirka wadada Garowe-Laascaanood iyo wadada Garowe –Bosaaso.
sidoo kale, waxaa kamida horumarinta adeegyada bulsho ee as’aasiga ah sida hirgelinta ceelal biyoodyo, horumarinta waxbarashada, caafimaadka iyo sugidda Amniga.